Nepali Rajneeti | बिल गेट्स र मेलिन्डा छुट्टिएपछि उनीहरू बस्ने भव्य घरको के हुन्छ?
बिल गेट्स र मेलिन्डा छुट्टिएपछि उनीहरू बस्ने भव्य घरको के हुन्छ?
बिल गेट्स र मेलिन्डा गेट्सले डि’भो’र्स गरेको खबर सार्वजनिक भएको एक साता भयो। विवाह गरेको २७ वर्षपछि बिल र मेलिन्डाले डि’भो’र्स गरेको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका हुन्।
दुईको सम्बन्ध संसारभर चासोको विषय बन्यो। खबर थाहा पाउने बित्तिकै धेरैको मुखमा ‘के?’ भन्ने भयो होला। धेरैको मनमा थुप्रै प्रश्नहरू उब्जियो होला। जस्तै किन? कसरी? उनीहरूले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरिरहेको फाउन्डेसनको अब के हुन्छ?
धेरैको मनमा अझै खट्किरहेको अर्को मुख्य प्रश्न बिल र मेलिन्डा बस्ने भव्य घरको अब के हुन्छ? भन्ने हो।
कस्तो थियो होला उनीहरू बस्ने घर?
बिल र मेलिन्डा बस्ने घरलाई जानाडु २.० भनेर पनि चिनिन्छ। जसरी हाम्रोमा ‘फलानो निवास’ भनेर नामकरण गरिन्छ।
बिल र मेलिन्डा बस्ने जानाडु २.० को अनुमानित मूल्य १३ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ। ६६ हजार स्क्वायर फिटमा फैलिएको जानाडु २.० वासिङटन तालको छेउछाउतिर छ। उनीहरूको छिमेकको रूपमा अहिलेको संसारकै धनाढ्य व्यक्ति जेफ बेजोस छन्।
यतिका वर्ष बिल र मेलिन्डाले आफू बस्ने ‍घरको आवरण गोप्य राखेका छन्। घर कस्तो छ, भित्र के-के छन् भन्ने पूरा जानकारीको रिपोर्ट अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि विभिन्न मिडिया र आगन्तुकहरूले जानाडु २.० को भित्री आवरणबारे धेरथोर रिपोर्ट सार्वजनिक गरेका छन्।
धनाढ्य व्यक्तिहरूको घर कस्तो हुन्छ भन्ने आफैं पनि अनुमान लगाउन सक्छौं।
सन् १९९५ मा न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित एक लेखका अनुसार जानाडु २.० मा २० वटा कार अट्ने ग्यारेज छ। यो एक पहाड नजिकै छ। जानाडु २.० भित्र ६० फिटको इनडोर र आउटडोर स्विमिङ पुल पनि छ। जसमा पानीभित्र म्युजिक सिस्टम व्यवस्था छ। यहाँ ट्राम्पोलिन कोठा पनि छ जहाँ जिम अथवा अन्य व्यायाम गर्न सकिन्छ।
जानाडु २.० भित्रै दुई हजार ५ सय स्क्वायर फिटको जिमखाना रहेको प्रकाशित लेखमा समावेश गरिएको थियो। त्यस्तै भित्र आर्ट-डेको फिल्म थिएटर छ। अर्थात् भर्चुअलमा वास्तुकला डिजाइनहरू भएको थिएटर। यहाँ हरेक कोठामा टच-प्याड-नियन्त्रित, भन्नाले छोएकै भर बत्ती, संगीत र कोठाको वातावरण नियन्त्रण गर्न सकिने प्रणाली छ।
‘हामीसँग त्यो घर सदाको लागि रहने होइन,’ मेलिन्डाले सन् २०१९ मा न्यूयोर्क टाइम्सलाई भनेकी थिइन्, ‘वास्तवमा म त्यो दिनको प्रतिक्षामा छु जुनबेला बिल र म पन्ध्र सय स्क्वायर फिटको घरमा बस्नेछौं। यो घर म आउनुभन्दा अघि बनाइएको भए पनि यसको पूर्ण जिम्मेवारी मैले नै लिएकी छु।’
बिल र मेलिन्डा गेट्स बसेको घरबारे विभिन्न पत्रिका र अन्य श्रोतहरूले तयार पारेका रिपोर्टबाट केही झलक पाउन सक्छौं। तर अब यो घरमा को बस्छन् वा घरको के हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म यकिन छैन।
फोर्ब्स म्यागजिनका अनुसार बिल गेट्स संसारको चौथो धनी व्यक्ति हुन्। बिल गेट्सले सन् १९७५ मा कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्पनी, माइक्रोसफ्ट स्थापना गरेका हुन्। तर गत वर्ष मात्रै उनले माइक्रोसफ्ट बोर्डबाट राजीनामा दिए।
केही समय अघिदेखि बिल गेट्स र मेलिन्डा गेट्स विभिन्न लोककल्याणकारी कामहरूमा आवद्ध छन्। उनीहरूको ‘बिल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन’ छ।